Faa'iidada - Sichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co., Ltd.
Kala sarraynta shirkadda
1. Waxaan nahay soo saare ku takhasusay soo saarida tabeelaha sanaadiiqda nalka lagu keydiyo tamarta ee dukaamada ku habboon. Ma jiro guddi dhexdhexaad ah oo nala shaqeeya.
2. Tan iyo markii la aasaasay 7 sano ka hor, shirkaddu waxay heshay afar shati qaran oo ku yaal warshadaha wax soo saarka sanduuqa fudud ee bakhaarka fudud.
3. Shirkadeenu waxay leedahay warshad xirfadle ah oo bedkeedu dhan yahay 4,200 mitir murabac ah iyo afar sanduuq oo fudud oo sameysma khadad wax soo saar.
4. Zhengcheng hadda wuxuu u adeegay in ka badan 100 magac oo Shiinaha ah wuxuuna soo saaraa qiyaastii 30,000 oo mitir oo sanduuqyo iftiin oo tamar-badbaadin ah sanadkiiba ah.
5. Shirkadayadu waxay kiraysatay naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah si ay u siiyaan sawirro naqshad loogu talagalay calaamadaha dukaankaaga. Nidaamkeena qaabeynta waa lacag la'aan.
1.Bandhigga iftiinka buuxa ayaa tamar-cunaya, qalabkiisa nalka ku dhex jirana si fudud ayaa loo dhaawacay. Astaamaha iftiiminaya ee la hogaaminayo maaha kuwo muuqda habeenkii, astaamaha iftiimayaana waxay u nugul yihiin baraha iftiinka.
Saxeexyada dhaqameed waxaa badanaa lagu sameeyaa guud ahaan, dayactirkuna wuxuu u baahan yahay xirfad-yaqaanno xoog leh, kharashka dayactirkuna waa mid sarreeya, ama xitaa aan macquul ahayn in la dayactiro, taasoo keenta kharashka isticmaalka oo sarreeya.
Shaqada dayactirka waa mid aad u dhib badan, sidaa darteed ka dib muddada damaanada, soo saarayaasha ayaan diyaar u ahayn inay hagaajiyaan calaamadaha.
4.Qiimaha maalgashiga bilowga ah ee soosaarida boodhadhka caadiga ahi way hooseeyaan, maxaa yeelay tabeelayaashani inta badan waxay ka samaysan yihiin alwaaxda acrylic-ka dib loo warshadeeyay. Si kastaba ha noqotee, xayndaabyadu way libdhi doonaan, qallooci doonaan, gabi ahaan doonaan iyo dhibaatooyin kale 3 illaa 5 bilood gudahood, taas oo si weyn u gaabinaysa nolosha adeegga calaamadda.
Soo saarida sanaadiiqda iftiinka dhaqameed, kloroform-ka xayrta ah ayaa badiyaa loo isticmaalaa in lagu xiro jajabka iyo darbiyada. Waxqabadka shaabadu wuu daciif yahay, waxayna u nugushahay saameynta heerkulka iyo isirrada dhaqaaqa si ay u keento dildilaac. Boorka iyo wasakhda ayaa si dhib yar isugu soo ururi doona sariirta iyo baararka ka dib markii roobku maydho. Sidaa darteed, siigada iyo wasakhda lama nadiifin karo, waxayna saamayn ku yeelan doonaan saamaynta iftiinka leh ee calaamada sidoo kale waxay dhaawici doonaan muuqaalka calaamada.
6. Sanduuqyada nalka caadiga ah ayaa badanaa loo habeeyay iyadoo loo eegayo cabirka goobta. Haddii dukaanku dhaqaaqo, heerka isticmaalka calaamadda asalka ah wuxuu ka yar yahay 5%.
Dhibaatooyinka aan wax ka qabanay
Kala sarraynta sheyga
1.More ka badan, ka jaango'an, ka sii mideysan, ka sahlan
2. Biyo-la'aan iyo Boodh-caddeyn
Sanduuqa iftiinka ee keydinta tamarta ee Zhengcheng wuxuu qaataa sanduuq gaar ah oo si buuxda uxiran oo isku xira jirka si loo hubiyo in gudaha gudaha sanduuqa nalka uu yahay mid hawo badan leh oo gebi ahaanba go'doraya uumiga, boodhka, iyo kaneecada
Naqshadaynta qaabdhismeedka dayactirka 3.Ingenious
4. Isticmaalka tamarta hooseysa
Zhengcheng tamarta keydinta sanduuqa iftiinka sanduuqa
Habka iftiiminta sanduuqa nalka caadiga ah
Qaadashada 100 bakhaar oo nooc gaar ah oo dukaamada ku habboon ah, tabeeleyaasha waa 1m * 10m (24 saac), nalalkuna waxay daaran yihiin 12 saacadood maalintii tusaale ahaan, isbarbar dhigga tamarta tamarta ee u dhexeeya sanduuqyada nalka Zhengcheng ee keydinta tamarta iyo iftiinka caadiga ah sanduuqyada.
Sanduuqa nalka dhaqameed Sanduuqa Iftiiminta ee Zhengcheng
tuubo iftiin ah tuubooyin iftiin leh (16w) Shahaadada V-qaabaysan ee 45 ayaa keentay iftiinka iftiinka (28w)
habka iftiinka 4 saf halkii mitir, 1.1 mitir oo balaadh ah oo saf ah safka, 9 koox wadar ahaan 7 qaybood (hal tubbo / hal module) + 2 geesood (badh tubbo / hal gees), 8 qaybood wadar ahaan
cunitaanka korontada 0.016kwh * 4rows * 9groups * 12h / d * 365d = 2522kwh 0.028kwh * 8groups * 12h / d * 365d = 981kwh
biilka korontada (1.2 CNY / KWH) 2522 * 1.2 * 100 = 302600CNY 981 * 1.2 * 100 = 117700CNY
Adeegso sanaadiiqda iftiinka ee keydinta tamarta ee Zhengcheng si aad ugu keydiso biilasha korantada hal sano gudahood:
5 sano: 184900CNY / y * 5 = 924500CNY≈138274.04USD
Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Calaamadaha Iftiiminaya, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa, Calaamadaha Xayeysiinta, Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Saxeex Farmashiyaha,